Etsy amin’ny PK OO ry Tselonina
Nisy ny famerenana ilay hira “Telefaonina”, nataon’i Tselonina ary nampian’i Farakely sy Fara Gloum. Namerina indray ireo mpankafy tany amin’ny taona 80 tany izany. Ho an’ireo mbola te hianoka bebe kokoa ny “revy” toa izany, hisy ny “alina an-gitara”, izay hotontosain’ireto mpanakanto ireto anio, manomboka amin’ny 9 ora alina, etsy amin’ny PK 00, Garan’i Soarano. Fiarahana tsy sambany izy ity, ka azo antoka fa hahafa-po ireo mpankafy ny vazon’Ingahibe.
Iraimbilanja etsy amin’ny Piment Café
Anjaran’ny rock indray no miaka-tsehatra etsy amin’ny Piment Café Behoririka anio alina. Avy dia ireo ela nihetezana amin’ity gadona ity, satria handray ny tarika Iraimbilanja indray ny sehatra. “Takariva rock”, hiainana indray ireo hiran’ny tarika, hiampy ireo sanganasan’ny mpanakanto vahiny fanaon-dry Niry sy ny tariny rehefa “cabaret” toa izao. Hanakoako etsy Behoririka indray ny “Tao an-tsekoly”, “Raosy jamba”, “Ahoana ny ho avy”, sns.
Nihaona ny minisitra sy ny mpanakanto
Nisy ny fihaonana teo amin’ny minisitry ny kolontsaina, Rabenirina Jean Jacques, sy ireo mpanakanto mpanao mozika omaly. Fihaonana izay nitondran’ireo mpanakanto indray ny olana sedrainy sy ny vahaolana avy amin’izy ireo izany. Efa tafita any amin’ny minisitra tompon’andraikitra ny hafatra, ka miandry ny fanatontosana izay tapaka sy naroso izy ireo.